R/wasaare Dr.Abiy Ahmed oo Magacaabay Wasiiro Qatar ku ah Soomaalia (Xaqiiqooyin kaa qarsoon) – Xeernews24
R/wasaare Dr.Abiy Ahmed oo Magacaabay Wasiiro Qatar ku ah Soomaalia (Xaqiiqooyin kaa qarsoon)
22. April 2019 /in Qormooyin/Articles /von admin
Abiy Ahmed iyo kacdoonkii guuleystay ee ay shucuubta Itoobiya uga taqaluseen Xisbigii TPLF oo 27 sano muquunin dalkaas ku haystay waa sannad jirsaday.
Mudaddii sannadkaas ahayd waxaa dhacay is bedello badi la mahadiyey sida; nabadeynta xadka Ethio-Eritrea, sii deynta maxaabiistii siyaasadda u xirnaa, soo dhaweynta jabhadihii dibad joogga ahaa, siyaasad arrimo dibadeed oo saaxiibtinmo ku dhisan iyo bilowga hirgalinta dhaqaale xor ah!
Ujeedka labadaas shaqsi loogu magacaabay jagooyinkaas
Oromada, siiba shaqsigii sababteeda lahaa in uu Ra’isul Wasaare noqdo Abiy Ahmed, Lemma Megersa oo ah Oromo waxa uu u dhiibay Wasaaradda Difaaca, ujeedka waa in qoymiyadaas oo boqolaal sano guumeysi iyo dacadiyo kala kulmeysay Ahxaarada iyo Tigreega oo la’isku yiraahdo ‘Abyssinian Stock” ay awood ku yeelato ciidama iyo dhammaan laamaha ammaanka! Amxaarada oo ay hadda kula jiraan is xulufeysi DANI ku bidday ah waxaa loo dhiibay Wasaaradda Arrimaha Dibadda!
W/Q: Mohammed Kaafi
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/02/abiy-ahmed-1.jpg 480 597 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-22 08:28:202019-04-22 08:28:20R/wasaare Dr.Abiy Ahmed oo Magacaabay Wasiiro Qatar ku ah Soomaalia (Xaqiiqooyin kaa qarsoon)
Halgamme Cilmi Cumar Khayre oo si xeel-dheer uga hadlay Qaska Oromada iyo Siyaasad... Dood muhiim ah oo ku saabsan maamulka Somaliland iyo Soomaaliya.